April 26, 2018 April 27, 2018 9 Amazwana ku-AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual Manual
1.1.1 Izincwadi Ezihlobene
Xhuma kunethiwekhi yakho, vula isiphequluli sewebhu bese uthayipha “http: //air4920.local” kufayela le-
4. (Okokuzithandela) Manje, ungaxhuma amadivayisi anentambo (kulesi sibonelo, i-Set-Top Box) ku-Air 4920 usebenzisa ikhebula le-ethernet (ipulagi eliphuzi).
Uma ungathanda ukuthuthukisa ukumbozwa okungenantambo kwelinye igumbi, ungasetha i-Air 4920 eyengeziwe. Ungaxhuma futhi amadivayisi nge-Ethernet kule Air 4920 (ngokwesibonelo i-STB, ikhompyutha noma ikhonsoli yomdlalo).
- Futhi, kunconywa kakhulu ukuthi amandla kagesi angenakuphazanyiswa (ama-UPSes) (noma, okungenani, izivikeli zokuvikela) asetshenziselwa ukuvikela ama-Air 4920s namanye amadivayisi kagesi (amamodemu we-VDSL, ama-routers / amasango, amabhokisi we-set-top, ama-TV, njll. ) ezingozini zikagesi. Iziphepho zikagesi, ukukhuphuka kwamandla kagesi nezinye izingozi ezihambisana negridi yamandla kagesi kungadala umonakalo omkhulu kumadivayisi kagesi. Ngokungeziwe, noma ukuphazanyiswa kwamandla kagesi ngomzuzwana owodwa kungenzeka ukuthi kubangele wonke ama-modem, amaklayenti angenazintambo, ama-TV, ama-set-top box, njll. Ukuthi anikwe amandla noma asethwe kabusha. Noma imishini iqala ngokuzenzakalela, kuzothatha imizuzu embalwa ngaphambi kokuthi zonke izinhlelo zibuyele ku-inthanethi futhi zikuvumele ukuthi uthokozele izinsizakalo zakho ezenzelwe i-Intanethi.
Lo mkhiqizo usebenzisa isoftware eyenziwe ngumthombo ovulekile womphakathi. Noma iyiphi i-software enjalo inikwe ilayisense ngaphansi kwemigomo ethile yelayisense esebenza kuleyo software ethile (njenge-GPL, i-LGPL njll). Imininingwane eningiliziwe ngamalayisense asebenzayo nemibandela yelayisense ingatholakala kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi wedivayisi. Ngokusebenzisa lo mkhiqizo, uyavuma ukuthi ubuyekeze leyo migomo yelayisense nokuthi uyavuma ukuboshwa yiyo. Lapho leyo migomo ikunikeza kwikhodi yomthombo yale software eshiwo, leyo khodi yomthombo izotholakala ngezindleko uma icelwa kuma-AirTies. Ukuthola ikhophi yale khodi yomthombo, sicela uthumele isicelo sakho ngokubhala nge-imeyili ku [i-imeyili ivikelwe] noma ngeposi lomnenke ku: AirTies Wireless Communications Gulbahar Mah. U-Avni Dilligil Sok. Cha: 5 Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / Turkey AirTies bazokuthumelela i-CD enekhodi yomthombo eceliwe engu- $ 9,99 kanye nezindleko zokuthumela. Ngemininingwane sicela uxhumane [i-imeyili ivikelwe]
Imanuwali Yomsebenzisi Womoya Omncane Wesixwa Ne-U22V Incwajana Yomsebenzisi Encane Yomshini Othulisayo Isixhumi Ne-U22V - Kwenzelwe ...
Imanyuwali Yomsebenzisi weKalarstein Wonderwall Air Art Smart Ibhukwana Lomsebenzisi Womsebenzisi weKalarstein Wonderwall Air - I-PDF eyenziwe ...
I-Samsung Front Control Slide-in Electric Range ene-Smart Dial & Air Fry [NE63T8711SS] Ibhukwana Lomsebenzisi I-NE63T8711SS Samsung Front Control Slide-in Electric Range nge-Smart Dial ...
Ibanga legesi le-Samsung Front Control Slide-in ne-Smart Dial & Air Fry NX60T8711SS Ibha yomsebenzisi we-Oven I-Samsung Front Control Slide-in Gas Range ene-Smart Dial & ...
Ibanga legesi le-Samsung Front Control Slide-in ne-Smart Dial & Air Fry NX60T8711SS Ibha yomsebenzisi we-Oven I-NX60T8711SS Samsung Front Control Slide-in Gas Range nge-Smart Dial ...
Ibhuku lokufundisa ngeBreville LAP300 Smart Air Purifier INcwadi Yokufundisa Yokuhlanza i-Smart Air TM - I-LAP300 BREVILLE INCOMELA ...
Ngisebenzisa ikhasi lewebhu lomlawuli we-router yami, bengibona ukuthi i-router ibibona wonke amayunithi amathathu (ngalinye linekheli le-IP elihlukile). Ngisebenzisa ikheli le-MAC eliboniswe ekhasini lomlawuli we-router futhi ezansi kweyunithi eyinhloko, ngithole ikheli le-IP leyunithi eyinhloko. Ngemuva kwalokho kukhompyutha yami ephathekayo, ngafaka lelo kheli le-IP kuthebhu entsha yesiphequluli, futhi lokho kwangivumela ukuthi ngiguqule igama ne-password ye-wifi. Usuqedile (ungazami ukushintsha igama le-wifi nephasiwedi kwamanye amayunithi amabili).
Imanuwali yeGARMIN Force Trolling Yezimoto
Ibhukwana Lomsebenzisi Elibanzi Elimomothekayo Likagesi
I-SUNFORCE Imanuwali Yokufundisa Yokukhanya Kwelanga Elanga
I-HOBO Water Logger Housing HOUSING-U2x Incwadi Yomsebenzisi
Imanyuwali Yomsebenzisi we-Onset Smart Sensor S-ADAPT-X5-10
admin on I-Beurer FT 65 Incwadi Yokufundisa nge-Thermometer
Carol on I-PHILIPS InnoSpire Essence Nebulizer Compressor Manual Yomsebenzisi
UBOB SMITH on Imanuwali Yomsebenzisi Wokubhema kagesi eyi-30 Master eyakhiwe ngobuciko
UCecil Gregory on Imiyalo ye-FitPro Watch - FitPro Tonic kaKounga
USusan Engledow on I-ONN CD Boombox Instruction Manual